Kajawaabida dhibaatada COVID ee kuwa salka u ah salaanka dhaqaalaha - Ololaha Caalamiga ah ee Nabada Waxbarashada
Kajawaabida dhibaatada COVID ee kuwa salka ku haya Salaanka Dhaqaalaha
July 21, 2020 Warar & Muuqaal 0
Jameecada Hooyada Karmel Sr. Merin Chirackal Ayrookaran ayaa wajiyad u siisa shaqaalaha muhaajiriinta ah ee ku sugan koonfurta-galbeed ee Hindiya gobolka Kerala. (Sawir: waxaa la siiyaa GSR)
Iyada oo ay taasi Isku Xirka Corona, waxaan ku siinaa akhris kale oo faa'iido leh oo ka socda Warbixinta Gabdhaha Caalamka (waa mashruuc wariye kaatooliga Qaranka). GSR waxay bixisaa warbixinno gaar ah, gacanta koowaad oo ku saabsan arrimo kala duwan iyo dhibaatooyin looga hadlay waxbarashada nabadda, oo ay weheliso sharraxaad dhiirrigelin leh oo muujineysa adkaysiga iyo ka go'naanshaha boqorooyin badan oo kaatoolig ah shaqadooda si looga adkaado caddaalad darrada aasaasiga ah ee dhalisa dhibaatooyinka. GSR waa khasnad uruurinta daraasadaha kiisaska loogu talagalay waxbarashada nabadda.
Hoos waxaad kaheleysaa repost-ka maqaalka July 13, 2020 GSR “Sooryaanta Hindida ah waxay caawiyaan xoogsatada muhaajiriinta ah ee ku xanniban dariiqa guryahooda inta lagu jiro xiritaanka”Waxaa kahoreeyay hordhac lagu caawinayo barayaasha nabada si loo dhiso su'aalo ku haboon.
"Soorayaasha Hindida ah waxay caawiyaan xoogsatada muhaajiriinta ah… ” waa mid ka mid ah warbixinno badan oo cad, oo ay dhejiyeen Warbixinta Gabdhaha Caalamka. GSR waa isha si cad u qeexaysa sharraxaadda dhabta ah ee dhibaatada aadanaha ee ay soo rogeen qaab-dhismeedka dhaqaale ee adduunka ee caddaalad darrada ah ee ay muujineyso COVID-19, maadaama ay uga sii dareyso iyaga (eeg sidoo kale: Jaranjarada Dhaqaalaha waa Midab Midab leh.)
Sheekadani waxay ka sheekeynaysaa qaar ka mid ah siyaabaha hal abuurka leh ee haweenka bulshada rayidka ah, xaaladdan markay tahay walaalaha Kaatoliga, waxay uga jawaabaan dhibaatada dadka saboolka ah, xaaladdan shaqaale muhaajiriin Hindi ah, oo iyagu leh culeyska masiibada. Haddana waa tusaale kale oo ah tallaabada tooska ah ee haweenka ee dhulka ka jira xaaladaha dhibaatooyinka, si loo horumariyo amniga aadanaha. Tallaabada noocan oo kale ah ee lagu soo qaatay taxanaha GCPE ee usbuucii la soo dhaafay, Cusbooneysiinta ku saabsan Haweenka Nabadda iyo Amniga.
Waxaan aragnaa sida sooyadan katooliga ahi u caawiyaan muhaajiriinta shaqo la’aanta iyo hoy la’aanta ah Guri la'aanta waxay gelineysaa halis in la xiro xadgudub ku ah qufulka adag ee Hindiya, ma helin wax ay ku helaan laakiin waxay ku laabtaan, qaar badan oo lugeynaya, tuulooyinkoodii. Mar labaad, waxaan aragnaa wax ku oolnimada waxqabadka degdegga ah iyo kan maxalliga ah markay dawladuhu wax ka qaban waayaan, ururrada waaweyn ee qarankuna aad ayey u adag yihiin howlaha degdegga ah. Duruufaha noocan oo kale ah ayaa ku dhiirrigeliyay soo-jeedimaha Qorshayaasha Waxqabadka Dadweynaha iyo fikradaha ku xusan boostada GCPE: Buuggooda 'Alps-Adriatic Manifesto': Siyaasad cusub oo loogu talagalay Post Post COVID World. Jawaab la'aanta iyo ku filnaanshaha jawaabta dawladaha ee khataraha badan ee meeraha, sida aan ku soo aragnay aafada, saboolnimada adduunka, hubka nukliyeerka, iyo dhibaatada deegaanka, waxay ka dhigeysaa ficil maxalli ah mid deg deg ah waxayna muujineysaa waajibaadka iyo kartida bulshada rayidka ah inay hoggaamiso wadada ilaa a Caadi.
Sooryaanta Hindida ah waxay caawiyaan xoogsatada muhaajiriinta ah ee ku xanniban dariiqa guryahooda inta lagu jiro xiritaanka
Loreto Srs., Bidix, Nirmala Toppo, Sawanti Lakra, Jiwanti Tete, Rajini Lugun iyo Gloria Lakra waxay ku sugayaan kuleylka kuleylka leh baakadaha cuntada ee shaqaalaha muhaajiriinta ah ee safarka ugu jira joogsiga weyn ee waddada weyn. (Sawir: waxaa la siiyaa GSR)
(Waxaa daabacay: Warbixinta Gabdhaha Caalamka. 13-Luulyo, 2020.)
CUSUB DELHI - Sr Sujata Jena way seexan kari wayday kadib markay aragtay sawirka gabadh yar oo culays culus saaran yahay madaxeeda fariin WhatsApp ah. "Wejigeeda wasakhaysan, oo ay qoyaan ka ilmaynayso, ayaa i haysa," xubinta Quluubta Quduuska ah ee Ciise iyo Maryan ayaa u sheegay Global Sisters Report.
Sawirka ayaa la faafinaayay si loo muujiyo dhibaatada boqolaalka kun ee qof ay ku dhufteen wadooyinka waa weyn ee India ka dib markii dalka oo dhan laga xiray si loo xakameeyo faafitaanka cudurka coronavirus.
Sida ay Jena ku aragtay baraha bulshada sawirro iyo fiidiyowyo laga soo qaaday hareeraha Hindiya, garyaqaanka 38 jirka ah iyo nun ayaa u dhaqaaqday inay ka caawiyaan muhaajiriinta inay guryahooda gaaraan. Mid ka mid ah fiidiyowga fiidiyowga ayaa muujiyay 10 shaqaale ah oo isku ciriiriyey qol ku yaal Kerala, oo ah gobolka koonfur-galbeed ee Hindiya. Raggan ayaa sheegay in loo shaqeeyaha ay xireen ayna aad ugu baahnaayeen caawimaad si ay u gaaraan tuulooyinkooda Odisha, oo in ka badan 1,000 mayl u jira waqooyi-bari.
Maaddaama ay xiritaankeedu ku koobay buugeeda ku yaal caasimadda Odisha ee Bhubaneswar, Jena waxay May 17 ku biirtay shabakad baraha bulshada ah oo caawisa muhaajiriinta ku go'doonsan.
Markay tahay 24-ka Juun, in ka badan 300 oo muhaajiriin ah, oo ay ku jiraan 10-ka, ee ku xayiran gobollada koonfurta Hindiya waxay gaareen tuulooyinkoodii hooyo ee gobollada sida Bihar, Chhattisgarh, Odisha iyo West Bengal ee bariga Hindiya, mahadnaq Dadaalka Jena.
Jena waxay ka mid tahay boqolaal sooh Catholic ah oo ku jira safka hore iyadoo kaniisada ay gaareyso muhaajiriinta xoogsatada ah ee ay saameysay bilowgii 21-maalin xarigga ra'iisul wasaaraha Narendra Modi oo lagu soo rogay 1.3 bilyan oo qof oo reer Hindiya ah laga bilaabo saqda dhexe ee Maarso 25 iyadoo kaliya ogeysiis afar saac ah .
Xiritaanka, ayaa loo tixgeliyey isku daygii ugu weynaa uguna adkaa adduunka si loo xakameeyo aafada, ayaa la kordhiyay shan jeer iyadoo heerar kala duwan oo nasasho ah ilaa iyo 31-ka July.
Xiritaanka ayaa si lama filaan ah uga dhigay malaayiin shaqaale muhaajiriin ah oo magaalooyinka ka shaqeeya.
"Maadaama ay shaqo waayeen, ma haysan meel ay ku hoydaan, dakhli iyo nabadgelyo midna," ayuu yidhi Salesian Fr. Joe Mannath, xoghayaha qaranka ee Shirka Diinta Hindiya, ururka ay ku mideysanyihiin raga iyo dumarka diinta ka saraysa ee wadanka.
Markay xiritaanka joojisay nidaamka gaadiidka dadweynaha ee Hindiya, xoogsatada muhaajiriinta ah ee magaalooyinka waxay soo buux dhaafiyeen waddooyinka waaweyn iyo waddooyinka dhowr maalmood gudahood. Intooda badani waxay lugeeyeen qaarna baaskiil bay u aadeen tuulooyinkooda, boqollaal mayl u jira.
Mannath wuxuu leeyahay cabsida gaajada iyo qandaraaska coronavirus ayaa horseeday "fowdo ka bax”Shaqaalaha magaalooyinka.
Kooxaha kaniisadaha ayaa ka mid ah kuwa isku dayaya inay caawiyaan shaqaalahan.
6-dii Juun, Caritas India, oo ah hay'adda gargaarka bishobada Hindiya, ayaa ku wargelisay a webinar in kaniisaddu ay gaadhay in ka badan 11 milyan oo qof intii lagu jiray muddada xidhitaanka, oo ay ku jiraan shaqaale badan oo muhaajiriin ah.
Mannath, oo isku xira diinta Hindiya in ka badan 130,000, oo ay ku jiraan ku dhowaad 100,000 oo haween ah, wuxuu sheeganayaa in adeegga ugu badan ay fuliyeen kuwa diinta.
Haweenka iyo ragga diinta leh ayaa kula kulmay shaqaalaha go'doomay waddooyinka, guryaha hoyga ah iyo kooxaha isku raranta ah ee qaybaha kala duwan ee dalka. Iyada oo ay ka kooban tahay diimaha, jameecada iyo tabarucaadka hay'adda gargaarka, waxay siiyeen shaqaalaha hoy, cunto iyo lacag ay ku gaaraan guryahooda.
Mannath wuxuu ku andacoonayaa in diinta Katooliga ah ay qabatay "shaqo cajiib ah oo loogu talagalay kuwa ugu baahida badan iyada oo la xirayo." Wadaadka Salesian ayaa sidoo kale sheegaya in waxa diintu sameysay ay "aad uga badan yihiin" waxa ka muuqda warbixin kasta.
Markii aan ka codsaday madaxda waaweyn warbixin deg deg ah oo ku saabsan waxa la qabtay, waxaan helnay in ka badan 750 warbixin. Waxay muujineysaa adeegga ballaaran ee diinta ay qabanayaan, ”ayuu u sheegay GSR dhammaadkii Juun.
Mannath wuxuu sharraxayaa in diinta Katooliga ee Hindiya ay go'aansatay inaysan lahayn qorshe dhexe oo isku dubaridan oo lagu caawinayo shaqaalaha, laakiin lagu maalgeliyo shakhsiyaadka iyo jameecooyinka u adeegaya.
Mid ka mid ah diinta waa Loreto Sr. Punitha Visuvasam oo ku taal Doranda oo u dhaw Ranchi, caasimada gobolka bari ee Hindiya Jharkhand isla markaana hoy u ah kumanaan muhaajiriin ah.
Markay shaqaaluhu bilaabeen inay ku yimaadaan gawaarida waaweyn iyo basaska, soorayaasha Loreto markay ahayd May 23 waxay aadeen jidadka waaweyn ee Jharkhand iyagoo wata baakado cunto ah. Soorayaasha waxay heleen dad badan oo lugeynaya guriga. "Waxaan ka caawinay inay basaska raacaan tuulooyinkooda," Visuvasam ayaa taleefanka ugu sheegtay GSR. *
Waxay sheegtay inay heleen shaqaalihii oo gaajaysan, oon iyo daal badan isla markaana isugu soo ururay sidii xoolihii gawaarida xamuulka. Toddobaadyo, walaasheed waxay quudin jireen 400 illaa 500 qof oo transit ah maalin kasta.
Waxay sidoo kale la shaqeeyeen jameecado kale, sida Hawlwadeennada Hay'adda samafalka, iyo dhalinyarada Katooliga si ay ugu qaybiyaan cuntada hoostimaada jihada Ranch Archdiocese.
Jameeco kale oo ku taal Ranchi, ayaa Walaalaha Ursuline ee Tildonk, waxay la xiriirtay muhaajiriinta laga soo bilaabo Abriil 3. Soorooyinka waxay hoy ka dhigteen qaar ka mid ah iskuulkoodii Muri, oo 40 mayl bari ka xigta Ranchi.
"Waxaan u fidinay dhamaan baahiyaha aasaasiga ah sida cuntada, dharka iyo xirmooyinka amaanka," Sr. Suchita Shalini Xalxo, oo ka tirsan jamaacada gobolka Ranchi ayaa u sheegtay GSR June 17.
Xalxo waxay sheegtay in tahriibayaasha ay kujireen “xaalado murugo leh” markay yimaadeen xaruntooda. Kuwo badan ayaa socday laba ama saddex maalmood cunto la'aan. Qaarkood waxaa garaacay booliska markii ay ka gudbayeen gobol kale, ”ayay tiri Xalxo.
Diyaarinta gaadiidka muhaajiriinta ayaa ahayd walwalka ugu weyn ee dadka sida Sr Tessy Paul Kalapparambath. Iyada Walaalaha Walaalaha ah ee Nadaafadda** magaalada Hyderabad, caasimada gobolka Telangana ee koonfur bari India, waxay siisay muhaajiriinta socdaalka raashin iyo daawo.
Guryahooda daryeela, oo ku yaal meel u dhow waddo weyn, waxay u qaybiyeen raashin karsan iyo biyo la cabbo ilaa 2,000 oo muhaajiriin ah. Kooxdeeda waxay sidoo kale u qaybiyeen baakado cunto saldhigyada tareenka.
“Waxay ahayd arrin murugo leh inaan arko kumannaan kun oo gaajaysan oo harraad u qaba xilligan xagaaga,” Kalapparambath, oo ah xoghayaha Guddiga Shaqada ee Golaha Bishobada Katooliga ee Telugu, ayaa u sheegay GSR.
Magaalada Hyderabad, Sr. Lissy Joseph oo ka tirsan Walaalaha Maria Bombina tagtay basaska iyo xarumaha tareenka horaantii bishii Abriil sida ay warbaahinta uga warantay dhibaatada muhaajiriinta. Waxay la kulantay shaqaale ka kala yimid Assam, Jharkhand, Odisha, Uttar Pradesh iyo West Bengal - oo isku urursaday kooxo iyagoo aan haysan cunto, lacag iyo hoy toona.
"Waxay ahayd goob dhib badan," ayuu Joseph u sheegay GSR.
Koox ayaa u sheegtay Joseph in loo shaqeeyaha la waayey ka dib markii ay ku kaxeeyeen gaari xamuul ah ilaa Karimnagar oo deris la ah Telangana. Waxay ku guuleysteen inay raadsadaan gaari kale oo aado Hyderabad, oo in ka badan 100 mayl u jirta koonfurta. Yuusuf wuu la kulmay ka dib markii ay booliisku ka codsadeen inay ku noqdaan meel kasta oo ay ka yimaadeen. "Waxa ugu horreeya ee aan sameynay waxay ahayd inaan diyaarinno cunno," ayuu yiri Joseph.
Nunku wuxuu markaa u tegey bilayska, oo diiday inuu caawiyo shaqaalaha, isaga oo leh iyaga kama tirsana xukunkooda.
Sida Jena oo kale, Joseph wuxuu adeegsaday shabakadda dhaqdhaqaaqayaasha bulshada si uu caawimaad ugu raadsado muhaajiriinta. Joseph ayaa ku faafiyey sawirka shaqaalaha baraha bulshada haweeney qareen ah ayaa dacwad ka dhan ah booliska u gudbisay sawirka degmada.
“Wadaagida waxyaabaha ay tahriibayaashan masaakiinta ah baraha bulshada aad uga caawinayaan. Waxyaabaha waa dhaqaaqeen oo xafiiska shaqaalaha ee gobolka ayaa ila soo xiriiray, ”ayuu Joseph sharaxay. Sarkaal yar ayaa shaqaalaha u kaxaystay hoy ku meelgaar ah wuxuuna diyaariyey laba bas si uu u geeyo Odisha.
Qaar ka mid ah sooriyadaha ku nool Kerala ayaa loo diyaariyey inay wax ka qabtaan arrimaha shaqaalaha soogalootiga ah. Jameecada Hooyo Karmel waxay soo bilaabatay 2008 the CMC Dhaqdhaqaaqa Shaqaalaha Muhaajiriinta si ay u caawiyaan kuwa ka soo cararaya rabshadaha ka dhanka ah Masiixiyiinta ee Odisha sanadkaas. Mar dambe ayaa la kordhiyay si loo caawiyo shaqaalaha ka yimid gobollada kale.
Sr Merin Chirackal Ayrookaran, oo isku xira dhaqdhaqaaqa, ayaa sheegay in ay diyaariyeen kaamam caafimaad, talosiin iyo in loo maro shaqaalaha go'doonsan si ay guryahooda ugu laabtaan.
Gudaha Delhi, Qalbi xurmo leh Srr Celine George Kanattu ayaa ka mid ah dadka caawiya muhaajiriinta ku go'doonsan. Waxay bilowday inay caawiso xoogsatada kadib markii qaar ka mid ah shaqaalaha guryaha ka shaqeeya ay ugu yimaadeen cunto. Iyada oo taageero ka heleysa samafalayaasha iyo jameecadeeda, kooxdeeda waxay siisay raashin, dhar, maaskarro iyo fayodhawr ilaa 600 oo muhaajiriin ah.
Mid ka mid ah ka faa’iideystayaasha Kanattu waa Jameel Ahmed, oo ah muslim muslim ah oo wata taksi saddex lugoodle ah. Aabaha afarta caruur leh ayaa leh qoyskiisu gaajo ayey u dhiman lahaayeen hadii hablaha kaatooligga ah ee Katolikanka ah aysan siin lahayn xirmooyinka cuntada.
Dareen la mid ah ayaa loo sheegay Walaasha Anne Jesus Mary, agaasimaha xarun horumarineed oo ku taal Jashpur, oo ah magaalo ka tirsan gobolka Chhattisgarh ee badhtamaha Hindiya.
Waxay tiri mararka qaar muhaajiriinta ayaa gacmahooda ka soo dhici doona baakado cunno ah isla markaaba way cuni doonaan. Waxay markaa oran jireen, marwo, hadda waan sii socon karnaa. Waxaan rajeyneynaa inaan helno dad badan oo sidaada oo kale ah safarkayaga soo socda, '' ayay u sheegtay GSR xarunta adeegayaasha ee Franciscan.
Shaqaale badan ayaa xiriiray xiriiriyahooda sooriyada ka dib markay guryahooda gaaraan.
Jena waxay abuurtay koox WhatsApp ah kuwa ay caawisay. Waxay u isticmaalaan lambarkayga khadka taleefanka. Waxaan helaa wicitaano badan. Mararka qaar, waxaan seexan karaa kaliya 2:30 am waxaan hubiyaa in si nabad ah dib loogu soo celiyo qof kasta oo raba inuu aado gurigiisa
Waxay sidoo kale soo dhigtay sawirka gabadha ooyaya sida sawirka WhatsApp ee ay soo bandhigeyso. "Waan sii hayn doonaa ilaa kan ugu dambeeya ee muhaajiriinta xoogsada ay guryahooda gaaraan," ayay tiri.
[Jessy Joseph waa qoraa madax banaan oo ku sugan New Delhi. Sheekadani waxay qayb ka tahay wada shaqaynta GSR iyo Arimaha Hindiya, bogga wararka ee ku saleysan New Delhi oo diiradda saaraya wararka bulshada iyo diinta.]
# cusub caadi ah
# u nuglaanta
Hoggaamiyaasha Dhallinyaradu waxay Dalbanayaan Tallaabo: Falanqaynta qaraarkii saddexaad ee Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay ee ku saabsan Dhallinta, Nabadda iyo Amniga
Sida Loogu mashquulinayo Carruurta inta lagu jiro karantiilka guriga
Waxaa laga yaabaa 1, 2020 Warar & Muuqaal 0
Clarissa Mariano-Ligon, Ph.D. waxay la wadaagtaa hawl maalmeedka oo ay ku xigto labadeeda wiil si ay u ilaaliso dareenka isku dheelitirka shaqsiyaadka iyo howlaha qoyska. [sii wad akhriska…]
"Aqoonsiga Walaaca Ilmaha iyo Waxa Aad Ka Qaban Karto"
Waxaa laga yaabaa 3, 2020 Warar & Muuqaal 0
Dhakhtarka maskaxda ee ilmaha iyo dhallinta, Zairah Castelo-Corpus, MD wuxuu ku dhiirrigelinayaa waalidiinta inay siiyaan carruurta yaryar jawi daryeel iyo barbaarin si looga caawiyo inay si wax ku ool ah ula qabsadaan inta lagu jiro aafada. [sii wad akhriska…]
Runta, Posttruth iyo COVID-19: Jawaabaha Waxbarashada Qaar
April 16, 2020 Warar & Muuqaal 0
Miyaynu ku nool nahay xilli ka dib runta? Waa maxay curiyeyaasha tan ka kooban? Sidee tani u saameyn ku yeelatay diidmadii ugu horreysay, waxqabad la'aan, iyo ugu dambeyn wareer (iyo dil) jawaabta aafada - gaar ahaan dimuqraadiyadda reer galbeedka? Iyo sidee bay barayaashu uga jawaabi karaan? [sii wad akhriska…]